Ukwahlukanisa kagesi kutindlela letibalulekile ukuqinisekisa ukuphepha ukufakwa kagesi kanye nokusebenza wayo obushelelezi. Isenzo wamanje kushintshana esingeqile 0.5 ma, cishe imperceptible ngu umzimba womuntu. Ngokusho mithetho zamanje kushintshana zamanje nge imvamisa yabangamashumi amahlanu Hertz egeleza ngomzimba womuntu akumele leqe ukubaluleka 03 ma. Ngakho-ke, nesilinganiso esihleliwe ukwahlukanisa u elana isilinganiso kudingekile ukuze kube nesiqiniseko nokuphepha lapho ukusebenza imishini ephezulu voltage.
Izimfanelo ebaluleke kakhulu isembozo ekuvikeleni, kulesi sici, iba Inkomba ukumelana layo kagesi. I kagesi enamandla amakhulu kagesi esetshenziswa izinhlobo eziningi ezahlukahlukene ukwahlukanisa. Amathuluzi enamathela ehloselwe ukuqinisekisa ukusebenza evamile umshini. It is akhethiwe ngokuvumelana nezici lobuchwepheshe ukufakwa ngasinye. Ngakho-ke, nesilinganiso evamile ye ukwahlukanisa u elana yalolu hlobo lokulawula kuyadingeka ukuze ubuqotho enamathela enikeza ukusebenza apharathasi evamile.
ukwahlukanisa engeziwe usebenze umsebenzi luyingxenye zokuzivikela, kuhloswe ukuba ngakususi ngisho amathuba kulencane yokuthi umuntu abanjwe ugesi uma kwenzeka yikuphi ukulimala base elingenamikhono. Yokukala ukwahlukanisa u elana yalolu hlobo ibalulekile nokuvikeleka ukufakwa kagesi.
Ngaphezu kwalokho, kwamanye izinhlobo zikagesi esetshenziswa ukwahlukanisa double, okuyinto inhlanganisela izinhlobo ezimbili luthi alufane ngenhla. Isici esivelele sesimiso le nhlanganisela wukuthi etholakalayo touch ingxenye iyunithi akusho ukuthola voltage yingozi ngisho uma umonakalo ka omunye izingqimba nangokuvikela (kusebenta nobe ezengeziwe). Yokukala ukwahlukanisa u elana yalolu hlobo lokulawula kuyehla kube ubuqotho jikelele we igobolondo kanye ngamunye izingxenye zalo wedwa.
Isidingo njalo izinyathelo wokulinganisa nokulawula kubangelwa izici ukuthi ukuwohloka isimo enamathela ukwahlukanisa kanye ikhuthaza nokucekelwa yayo. izici ezinjalo enqabayo zibekwa kwasekuqaleni, ukulimala ubunjalo kagesi kanye ngemishini; kwethonya amakhemikhali nolaka, okuyinto akuyona into engavamile kwezinga lemikhiqizo yezimboni; umonakalo ezishisayo.
Idivayisi sokulinganisa ukumelana ukwahlukanisa libizwa - megger. Le foni yakhelwe hhayi kuphela ukulinganisa ukungawi impahla nangokuvikela, kodwa futhi ukuze uqinisekise ukumelana layo kagesi (ngamanye amagama, isivivinyo ku ukungabi khona iloli kagesi imvelo). Ngaphambi kokuhlola izinto zikagesi neze kufanele shaqa. Sheer ukwahlukanisa u elana nesilinganiso nqubo kumiswa idivayisi kagesi in the emathunjini ngu esikhethekile eyakhelwe electromechanical DC generator ezithile inkomba voltage ukuthi isetshenziswa into yokuhlola. Kulokhu voltage wokulinganisa kumele singeqi ukuthi we amapayipi.
Magnetic amazinga e ukwakhiwa
Umshini amanzi wesifunda - ithuluzi eliwusizo
MANPADS "Stinger": izici futhi uma iqhathaniswa analogue
Smoothies isisindo ukulahleka - iresiphi okukhuthaza Imiphumela brilliant
Bheka izinhlanzi ephusheni - isipho ukudalelwa
Izitezi ezikhonkolo phansi
Ukwelashwa nokuvikelwa ukuguguleka wesibeletho kwabesifazane nulliparous
Popular osomahlaya. "Isibhamu 6": amahlaya ekuphileni kwethu kwansuku zonke ethandwayo ibonisa indaba emfushane
Ungadliwa ophaya kuhhavini: esihlwabusayo njengoba ingane
Amasu zentengo izinhlobo zazo